Booliska soomaaliya oo fashiliyay qarax shabaab soo maleegeen? * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 On Aug 27, 2017
Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan qarax Qarax aad u xoogan oo galabta ah ka dhacay qeybo ka mid ah Wadada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho.
Daryanka Qaraxan ayaa inta badan laga maqlay degmooyinka Gobolka Banaadir, waxaana uu ka dhacay meel aan ka fogeyn halka loo yaqaano Xaaji Baasto oo u dhexeysa Tire biyaano iyo Shaqaalaha.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa la dhigay Wadada dhinaceeda balse markii ay ciidamada ka war heleen ee ay Wadada xireen uu qarxay.
Uur iyo qaac fara badan oo ka dhashay qaraxan ayaa cirka shareertay taasoo laga arkayey meelo badan oo ka tirsan caasimadda.
Waxaa weli xiran goobta uu ka dhacay qaraxan, iyadoo baaritaano ay wadaan ciidamada amaanka dowlada Somalia oo halkaas gaaray, iyadoo wararkuna ay intaas ku darayaan in qaraxan aysan jirin cid wax ku noqotay marka laga reebo burbur soo gaaray dhismeyaal ganacsi oo halkaas ku yaalla.
Wadada Maka Al-Mukmarama ayaa dhowaanahan noqotay bartilmaameedka ugu weyn ee lala beegsado qaraxyada loo adeegsado gaadiidka waana qaraxii lixaad ee ka dhaca wadadaas tan iyo bishii Ramadaan oo haatan laga joogo labo bilood.